You are here: Home / Blog / Health and Disease / Fahamka Guud ee Caafimaadka iyo Xanuunka
Erayada iyo mawduucyada aan sharraxaadda gaaban ka bixin doonno waa kuwa aynu inta badan u isticmaallo xagga caafimaadka maalin walba. Qaarkood waxaynu u adeegsannaa siyaabo aan sax ahayn iyo macnayaal aan ku habboonayn. Erayadaas waxa ka mid ah: caafimaad, xanuun, cudur, daaweyn, caabuq, ogaanshaha xanuunka, baadhitaan, waxyaabaha xanuunka sababa, xirfadlayaasha caafimaadka, waxbarashada caafimaadka iyo qaar kale oo aan wax ka taaban doonno.
Fahamka kelmadahaas iyo mawduucyadaas la xidhiidha caafimaadku waxay akhristayaasha u sahli doonaan inay degelka Saxadoon ka faa’iidaystaan, isla markaana ula jaanqaadaan oo ay u soo gudbin karaan wixii talo wadaag ah iyo aragtidooda si qoraallada iyo macluumaadka ku soo baxa bar aqooneedkan loo tayeeyo wixi sixitaan u baahanna dib u habayn lagu sameeyo.
Eraybixinta caafimaadka ee af-Soomaaligu weli waa qabyo. Waagii la qoray afka Soomaaliga aqoonta caafimaadku aad bay inoogu yarayd marka maanta loo eego. Waqtiganna waxa curyaamiyey burburka ku dhacay ummadda Soomaalida iyo nidaam la’aanta soo wajahday taas oo keentay in xataa jiritaankii afka Soomaaligu sii dabar go’aayo. Sidaa darteed, Saxadoon waxay ka qayb qaadan doontaa horumarinta eraybixinta caafimaadka, kobcinta heerka waxbarashada caafimaadka (Standard of medical education) iyo kor u qaadidda sayniska caafimaadka waxayna ku dedaali doontaa adeegsiga luuqadda Soomaaliga ah si tayada iyo fahamka adeegga caafimaadka kor loogu qaado oo meel heer sare ah loo gaadhsiiyo.
Innaga oo ka duulayna himilooyinkaas aan soo sheegnay ayaynu si aasaasi ah qormooyinka ugu horeeyaa ee mawduucyada caafimaadka iyo xanuunka, waxan ku bilaabaynaa caafimaadka, waxan is weydiin doonnaa, waa maxay caafimaad? Maxaa go’aamiya oo dejiya caafimaadka iyo caafimaad darrada? Waa maxay tilmaamayaasha caafimaadku? Waxa ku xigi doona qormooyin badan oo dhinacyo badan taabanaya sida kala duwanaanshaha xanuun iyo cudur, farqiga u dhexeeya cudur iyo caabuq, fahamka guud ee xanuunka, daliilka xanuunka iyo mawduucyo kale.
Si taxane ah ayay u socon doonaan qoraallada iyo gorfaynta mawduucyada iyo maaddooyinka kale duwan ee ku saabsan cilmiga sayniska caafimaadka iyo daryeelka caafimaadku waxayna soo bixi doonaan mar ama laba goor todobaadkiiba haddii ilaahay ka dhigo.